बम्बाईको कोठीमा बेचिएकी सुनिता रुदै भन्छिन:म सुत्केरीलाइ पनि छाडेनन् पापीहरुले — SuchanaKendra.Com
बम्बाईको कोठीमा बेचिएकी सुनिता रुदै भन्छिन:म सुत्केरीलाइ पनि छाडेनन् पापीहरुले
‘मलाई यहाँ यस्तो काम हुन्छ भन्ने पहिला थाहा थिएन । म त केटाहरुको लहलहैमा लागेर आएको । यहाँ आएपछि तपाईलाई भेट्दा मैले आमालाई भेटेजस्तो लाग्यो । मैले आजसम्म आमाको दुध खान पाएको थिइन, त्यसैले तपाईलाई आमा बनाउन चाहेको हुँ, उसले भावुक हुँदै भन्यो । उसको कुरा सुनिसकेपछि म पनि अलि भावुक भएँ । यदि कसैले मलाई ‘आमा’ सम्वोधन गरेर स्तनपानको याचना गरिरहेको छ भने त्यस्तो बेला के गर्ने ? म केही पल अलमलमा परेकी थिएँ । आखिर मलाई लाग्यो, जव उसले मलाई आमा नै भनिसकेको छ भने उसलाई छोरा मानेर स्तनपान गराउन केको आपत्ति ? बाँकी भिडियो हेरौ